Kedu ihe bụ sapropel, esi eji ihe dị na ugbo - Mkpụrụ ubi - 2019
Sapropel - ihe ọ bụ na otu esi eji ya na ubi ubi
Ọtụtụ mgbe, anyị na-eche banyere mkpa ọ dị ịzụ ala ma mee ka mkpụrụ na-amị mkpụrụ n'ubi anyị ma ọ bụ ubi ubi. Ndị ọrụ nri a na-enyere anyị aka. Dị ka o kwesịrị ịdị, a ghaghị inyefe ya ụdị ihe ọkụkụ. N'okwu a, anyị jupụtara ala na vitamin na mineral bara uru ma ghara imerụ ihe ọkụkụ ahụ. Otu n'ime nri ndị kachasị mma bụ sapropel, anyị ga-achọpụta ihe ọ bụ na otu esi eji ya.
Obere ihe gbasara inweta
Njirimara bara uru nke ihe
Otu esi etinye sapropel: ntuziaka zuru ezu maka ihe ubi
Esi tinye ya n'omume ya
Jiri dị ka akụkụ nke compost
Otu esi ahọrọ sapropel mma: ndụmọdụ na usoro
Nkọwa mkpụrụ fatịlaịza
Sapropel bụ ngwaahịa nke ire nke osisi na ihe ndị dị ndụ, plankton na ala humus, nke na-agbakọta na mmiri nke mmiri na-asọ, mmiri na-asọ oyi. Aha a sitere na okwu Grik "sapros" - rere ure na "pelos" - silt, dirt. Iri nri kachasị mma dị mma maka ihe ọkụkụ niile. N'ihi nzụlite sitere na ya na ezi nkwụsị, ọ na-enye nsonaazụ ngwa ngwa.
Ị ma? A na-eji sapropel mee ka fatịlaịza na-eme ogologo, ọ na-azụ ala na osisi ruo afọ 10.
N'ọdị anya, sapropel yiri ntụ ntụ, na njiko ya bụ ntụ. A na-ere ya na ngwugwu ma ọ bụ mbadamba.
Mwepu nke sapropel bụ usoro siri ike. Dabere na nha na omimi nke olulu ahụ, ụzọ nke mmịpụta si na ala na-agbanwe. Maka ntinye nke ihe ndi ozo di na ulo oru mmeputa ulo oru na-eji ndi ozo eme ihe. N'ihi ike nke nhọrọ a bụ ihe kachasị irè, site na ala na-ebute ngwa ngwa nnukwu silt, ebe ọ na-adịghị emebi emebi ọdọ mmiri ahụ maka mmiri ịṅụ mmiri.
Ọ bụrụ na organic fatịlaịza dị nnọọ ukwuu omimi, a na-eme nke ọma nke mmịpụta, nke bụghị dị ala na arụmọrụ, ma dị oke ọnụ.
Enwekwara ndị na-edozi obere ihe ndị na-eme ka mwepụta nke ihe ndị dị na mbara igwe nwetakwuo. Ndị na-ede akwụkwọ na-ede akwụkwọ na-esi na 15 ruo 200 n'arọ ma nwee ike ịmịpụta 30 cub. mita nke fatịlaịza kwa elekere. A na-ebugharị ngwaọrụ dị otú ahụ n'ihu ọnụ ala ụgbọala na-adọkpụ. Mana ọ bụghị onye ọ bụla nwere ike ịnweta ngwá ọrụ dị otú ahụ, ọ bụghị onye ọ bụla chọrọ ụdị fatịlaịza dị otú ahụ. N'okwu a, ka anyị hụ otú ị ga-esi jiri aka gị nweta sapropel. Maka usoro a, anyị chọrọ ngwaahịa pụrụ iche, ya bụ Villas na waya. Site n'enyemaka nke waya ị chọrọ iji "shọvel" a na-ahụ anya, na-agbanye ya n'etiti ezé nke ndị obodo. Ị nwere ike iji usoro a nke mmịpụta naanị na ala na-emighị emi, na-ebuli sludge si n'ala.
Ị ma? Ọ kachasị mma ịmalite ịkwanye sapropel na May mgbe mmiri gwụsịrị.
Mgbe e wepụrụ sapropel ahụ, ọ ghaghị ịbụ nke a mịrị amị. E kwesịghị ileghara usoro a anya ma bụrụ nke a ga-elebara anya. Anyị echepụtala ihe sapropel na-esi sie ike na a ga-ebu ya.
Fatịlaịza silty dị nnọọ ukwuu na vitamin na ihe ndị e ji amata ihe, ọ nwere potassium, sodium, ọla kọpa, zinc, ash, sodium, phosphorus, nakwa dịka enzymes dị iche iche na carotinoids. Mmalite nke fatịlaịza na-arụ ọrụ dị ukwuu, ebe ọ bụ na ngwakọ nke sapropel na-agbanwekwa dabere na osisi na ohia nke ọdọ mmiri ahụ.
Ngwurugwu organic a na ojiji maka osisi a mara ndi oru ugbo ubi ruo ogologo oge. A na-eji ya ịgbatị okooko osisi ornamental, mee ka ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụ osisi na-adị ndụ, wusi osisi mgbọrọgwụ ike, mepụta mkpụrụ ma melite ogo ngwaahịa ikpeazụ ahụ.
Mụta otú e si eji nsị anụ, yist, ammonia, ọnyọn, nettle, nri ịnyịnya iji fatịlaịza osisi.
Ngwunye dị mkpa maka fatịlaịza a bụ iji meziwanye ihe nke ala ma jupụta vitamin na mineral.
Ojiji nke ndị dị otú ahụ na-akwado ihe oriri na-emesi:
akwa ụda ala;
enwekwu ọdịnaya humus;
ịmepụta ebe a na-emepụta nri na ájá ájá;
Mbelata nke ịgbara n'ihi eziokwu na sapropel retains mmiri na ala;
ikpochapu bacteria pathogenic, dịkwa ka usoro nitrates.
Ọ dị mkpa! Ngwurugwu a nwere ike ime ka o ruo 100%, ma mee ya n'oge kachasị anya.
Ogologo ngwa nke ngwa oru a bu uba. A na eji ya maka ịzụta ọtụtụ osisi, gụnyere ime ụlọ.
Sapropel apụghị imerụ osisi, n'ihi ya, iji ya eme ihe n'ubi akwukwo ihe ubi di ezigbo mma. Ọtụtụ mgbe a na-agbakwunye ya na ala tupu akuku.
Mgbe ịgha mkpụrụ okooko osisi, ahịhịa ahịhịa ma ọ bụ obere mkpụrụ a kụrụ, ọ dị mkpa igwu ala na fatịlaịza dịka 1: 3. Uwe a ga-eme ka germination nke osisi mee ka ọ dịkwuo elu, na-agbatị okooko ma chebe osisi sitere na pests na ọrịa. Mgbe ị na-akụ mkpụrụ osisi, fatịlaịza na-agwakọta 1: 6 na ala, agbakwunyere n'olulu maka ịkụ mkpụrụ. N'ihi ya, osisi ga-agbanye mgbọrọgwụ ngwa ngwa ma mịa mkpụrụ ọma.
Maka ihe mgbakwasa n'elu ụlọ osisi, tinye nri na-akụ ala 1: 4.
Maka mgbakwunye nke ụlọplant na-ejikwa: potassium humate, nitrophoska, biohumus mmiri, succinic acid, ammonium nitrate, oke bekee.
Eji ogwu sapropel mee ihe n'ubi a na-achokwa ya dika nke compost. Iji mee ka mmiri fatịlaịza dị otú ahụ dị mma nke oke nri na-eri nri ga-abụ 1: 1. Burt na-adabere n'ígwé, akpa nke ikpeazụ na nke ikpeazụ ga-abụ ihe dị mma. Ịkwesighi ịmị akwa ahụ, n'ihi na ịkwadebe ngwa ngwa nke compost n'ahịrị kwesịrị ịnọgide na-adị ọcha. Ọ bụrụ na a na-eme usoro ahụ n'oge opupu ihe ubi ma ọ bụ n'oge okpomọkụ, mgbe ọnwa atọ gasịrị, ị nwere ike ifatụ mmiri na ala.
Iji họrọ ezigbo mmanụ fatịlaịza, ọ dị mkpa ịṅa ntị n'ebe e nwetara silt. Ọ dị oké mkpa na a na-esite na ala na-emepụta akụ na ụba na mpaghara ebe dị ọcha gburugburu ebe obibi, na ọ dịghị ebe dị nso n'okporo ụzọ na ụlọ ọrụ. Ihe dị mkpa ma na-agbanwe agbanwe, sapropel kwesịrị ịbụ nke a mịrị amị ma yie ash.
Ọ dị mkpa! Mmiri, mmiri, ụrọ ala - nke a abụghị sapropel. A ghaghị iji fatịlaịza mmanụ a mee ihe na nke a mịrị amị.
Sapropel bụ ezigbo ụlọ nkwakọba ihe nri, vitamin na mineral maka osisi na ala. Ihe ga-esi na ya pụta agaghị egbochi gị icho ogologo oge, dị ka mkpụrụ germination ozugbo, na ezigbo owuwe ihe ubi, na enweghị ọrịa ga-apụta ìhè ozugbo.
Atụmatụ pasili maka ihu anụahụ
Ahịhịa nkịtị anaghị adị mfe! Njirimara ọgwụ nke osisi ahịhịa, ntụziaka nke nkà mmụta ọgwụ
Ihe bara uru ma na-emerụ Brussels pulitere
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Sapropel - ihe ọ bụ na otu esi eji ya na ubi ubi